thinzar's blog: တောင်ကြီး အလွမ်းပြေ
Labels: entertainment, တောင်ကြီး
ဒီတစ်ခေါက် တောင်ကြီးပြန်ဖြစ်တုန်းက အစ်မဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ခွေကြည့်ရင်း ပြီးသွားတော့ ခွေပိုနေတဲ့နေရာမှာ ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို အရမ်းကြိုက်တာနဲ့ ကူးခဲ့တယ်။ အခုတင်မှာကတော့ "ပင်စိမ်းသီးပိုးထိုး တောင်ကြီးသူမ ရအောင်ပိုး" ဆိုတဲ့သီချင်း။ သီချင်းနာမည် သိရင် တစ်ချက်ပြောပြပေးပါနော်။ DVD ကနေ ကူးထားတာဆိုတော့ Format Factory နဲ့ file type ပြောင်း၊ Windows Movie Maker နဲ့ တစ်ပုဒ်ချင်းစီ ပြန်ခွဲပြီး Youtube မှာတင်ရတာဆိုတော့ အခုမှ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်ဖြစ်တယ်။ သီချင်းလေးတွေကော ဗီဒီယို ရိုက်ချက်လေးတွေကော တောင်ကြီး အလွမ်းပြေလေးတွေပါဘဲ။ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကို အဓိကထားပြီး ရိုက်ပြထားတယ်။ ရိုက်ချက်တွေ အရမ်းကောင်းတယ်။ ရိုက်တာက အောင်ဆန်း ဗီဒီယိုကပါ။ တောင်ကြီးမှာတော့ တော်တော် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ သူ့ဆိုင် ကြော်ငြာလေးလည်း ပါတော့ ဒီအတိုင်းဖြတ်ပြီး ပြန်တင်တာ (ကျမလည်း စီးပွါးလုပ်နေတာမဟုတ်တော့) ဘာ copyright နဲ့မှ မငြိလောက်ဘူးလို့တော့ ထင်တာဘဲ။ :D
တောင်ကြီးသူမ ဟန်ရေးလုပ်၊ ယောကျာ်းရမှ ဝတုတ်တုတ်၊ မုန်လာထုပ် မုန်လာထုပ် ဆိုတာတော့ အရမ်းသဘောကျတယ်။ ကိုယ့်ကို ဝဋ်လည်နေဦးမယ်။ :D တောင်ကြီးသူမ၊ ဓနုမ ပအိုဝ်မ လေးတွေတော့ ဒီသီချင်းကြားရင် သတိထားပေတော့ဘဲ။ ပင်စိမ်းသီးကို စားဘဲ စားတတ်တာ။ အသီးအကြောင်းတော ့သိပ်မသိဘူး။ သိချင်ရင်တော့ မနိုင်းနိုင်းစနေ ရေးဖူးတဲ့ ပင်စိမ်းသီးအကြောင်းနဲ့ တွဲဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်။
ဥက္ကာဦးသာရဲ့ ပင်စိမ်းသီးပိုးထိုး remix version (Mediafire မှာ တင်ထားပေးပါတယ်) remix တဲ့။ ခံစားလို့ကို မရဘူး။ သီချင်းအကောင်းကို ဖျက်တယ်လို့ဘဲ ထင်မိတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်။
comment မှာ ကိုလွိုင်လင် ပြောပြသွားတာ။ သီချင်းနာမည်က အဖြူရောင် သံစဉ်များ တဲ့။ သီချင်းစာသားကောပါတဲ့ MTV ကိုတော့ Youtube မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
သီးလေးသီး အငြိမ့်ထဲမှာ ပြောင်ပြီး ဆိုထားတဲ့ သီချင်းပဲ။ အခုမှပဲ သေသေချာချာ နားထောင်ဖူး တော့တယ်။ :D
5/1/09 4:29 PM
ကိုလွိုင်လင် ပြောသလိုပဲ..ဟုတ်တယ် သီးလေးသီးမှာ စကြားဖူးတာ.. ကျေးဇူးပဲ....
5/1/09 5:52 PM
သီချင်းနာမည်က “အဖြူရောင်သံစဉ်များ” တဲ့။ ခုနက မသိလို့ ကောင်မလေးကို မေးလိုက်တာ။ :D
6/1/09 1:14 AM
I like that original song not remix. One day, during staying in Myanmar, while I was going on the way to Yangon, I heard that MTV song in the bus. Quite funny and I was laughing alone at the corner. Luckily there were less people in the Bus.if not they will say I am crazy. :)
If possible can I have that original song???
7/1/09 11:46 PM
ဒီလို တောင်ကြီးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို တောင်ကြီးချယ်ရီမှာလည်း တင်ပေးစေလိုပါတယ်....တီတီ...
8/1/09 9:43 PM
ကိုလွိုင်လင်၊ ကိုဇနိ >> သီးလေးသီးထဲမှ စကြားဖူးတာလား။ တောင်ကြီးသူ တောင်ကြီးသားတွေအတွက်တော့ သိပ်မစိမ်းဘူး။ ကထိန်တို့ မီးပုံးပျံလွတ်ရင်တို့ဆို အမြဲကြားနေရတာလေ။ ဒါပေမယ့် ဟိုတစ်ပိုဒ် ဒီတစ်ပိုဒ်ပေါ့။ သီချင်းနာမည်းပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးဘဲနော်။
Harun>> I hv original song in video .wmv format only. u want mp3?? later I'll convert and upload
နေလင်း>> ok..ငါ့တူပြောမှ သတိရတယ်။ တောင်ကြီးချယ်ရီမှာ သွားတင်လိုက်ဦးမယ် :)
9/1/09 2:08 PM
စကားမစပ် ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှာ ၂ တန်းအထိတက်ဖူးတယ်..။ ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှဆရာတွေက ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်၊ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်မွှေးမွှေး ပြီးတော့ ဆရာကြီးဦးချစ်ဆိုင်(ဆုံးသွားရှာပြီ)..။ အစ်မဘယ်နှခုနစ်ထိတက်ခဲ့တာလဲ..။
10/1/09 4:14 AM
thinzar>> yes i already got that song. Thanks.. See u later...
11/1/09 10:47 AM
Phyo Evergreen>> အစ်မတို့တုန်းက လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းက မူလတန်း အထိဘဲ ရှိသေးတာ။ ၁၉၉၅ မှာ လေးတန်းအောင်တယ်။ နှစ်တန်းအထိဘဲဆိုတော့ ဦးစိန်အောင်၊ ဦးကြည်မောင်၊ ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း ဒေါ်အုန်းညွှန့် တို့ကို မသိဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီကျောင်းက ဆရာ ဆရာမ တွေကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ဘူး။ အဲဒီကျောင်းမှာ တော်တော်ပျော်ခဲ့တာ..
harun>> ok :-)
12/1/09 9:22 AM
17/1/09 1:27 AM
သီချင်းလေး နားထောင်သွားတယ် ညီမ။ သဘောကျလို့။ ကျေးဇူး။
17/1/09 5:07 AM
19/1/09 3:16 AM
ဆရာ ဆရာမနာမည်တွေကို မှတ်သားသွားပါတယ် (ဟမ်)..
21/1/09 12:11 AM
khin oo may>> အမ်းမား.. လျှာအအေးပါတ်သွားဦးမယ်။ :P
မနုသွဲ့ >> သဘောကျတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် :)
AungToe>> me too
TZA>> အရမ်းကို မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဘဲနော်။ ဟမ်.. ဒါတောင် လေးတန်းအထိဘဲ ရှိသေးတယ်။ သိချင်သေးတယ်ဆိုရင် နောက် အယောက် ၅ဝ လောက် နာမည် ထပ်ရွတ်ပြရဦးမလားဟင်။
22/1/09 12:02 PM
ဦးစိန်အောင်လည်းသိတယ်..သူငယ်တန်းတုန်းက မြေဖြူခဲနဲ့အခေါက်ခံရဖူးတယ်..။ ဦးကြည်မောင်ကမုန့်ဆိုင် ဘေးကအိမ်လေးမှာနေတာလေ။
ဒေါ်ခင်စန်းဝင်းတော့မသင်ဖူးဘူး..။ ဒေါ်အုန်ညွန့်တော့ သိတယ် ငယ်ငယ်ကကျောင်းကပွဲမှာ အတင်းဝင်ကခိုင်းတာ ။ ၉၅မှာ ကျွန်တော်ကသူငယ်တန်း..။ ခေါင်းလောင်းတီးတဲ့ ဒေါ်မေစိုးလည်းသတိရသွားတယ်.. အတန်းထဲကနေကြည့်နေတာ သူထွက်လာတိုင်း ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းတီးတော့မယ်ထင်နေတာ ခေါင်းလောင်းသာဆိုတယ် တကယ်ကမြေအိုးကြီး စောက်ထိုးလုပ်ထားတာ...။
12/2/09 10:01 AM
Phyo Evergreen>> ထပ်မန့်သွားတာကို ထပ်လောင်း မန့်လိုက်ဦးမယ်။ :-D phyo evergreen ပြောမှ ကျောင်းကပွဲကို သွားသတိရတယ်။ အစ်မဆို အတင်းကခိုင်းစရာမလိုဘူး။ သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိ နှစ်တိုင်းပါတယ်။ ကရတာ ကြိုက်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အကသွားတိုက်ရင် စာမသင်ရတာကို သဘောကျလို့။ ပြတင်းပေါက်နား ထိုင်ရတဲ့ အခေါက်တိုင်း အဲဒီ ခေါင်းလောင်းနား လူဖြတ်သွားရင် ရင်ခုန်တယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာတော့ အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးဘဲ။
13/2/09 3:11 PM
သဉ္ဇာ က ၁၉၉၅ မှာ လေးတန်းအောင်တယ်ဆိုရင် monkey ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသိလား....
မြန်မာနိုင်ငံမရောက်တာ ၁၄ နှစ်ရှိပြီ ....
လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း နဲ့ အထက ၄ ကိုလွမ်းတယ်...
ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း ကိုလဲ သတိရတယ်...
ဖြစ်နိုင်ရင် add လာနော်...
larry2529@gmail.com, larry2529@hotmail.com, larry@windowslive.com, larry2529 skype, larry2529@ymail.com, larry camfrog .....
25/10/09 12:41 AM
larry>> monkey ဆိုတဲ့နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ နာမည်ရင်းပြောရင်တော့ မှတ်မိရင် မှတ်မိမယ်ထင်တယ်။ သဉ္ဖာတို့က B အတန်းက.. အဲတုန်းက ကျောင်းအုပ်က ဦးချစ်ဆိုင်.. ဟုတ်တယ်..
26/10/09 3:02 PM
Very interesting things . . . You must be really good
Vegetables with Malar sauce - မာလာဟင်း